jaceylka mayaqaano nasab iyo qabiil midna | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
jaceylka mayaqaano nasab iyo qabiil midna
gabar somaliyeed oo ay si xun u garaaceen qosyskii ay ka dhalatey sababtu maxey tahay
-Iyada oo ah indhaha qoyskeeda iyo qaraabadeeda, Ubax Cabdi Cadood waxa ay gashay dembi khatar ah waa sida ay u ka dhigeyn kuwa aanan waxba ka aqoonin diinta suuban ee Islaam-ka
kadib markii ay guursatay nin ka soo jeeda qabiillooyinka la hayb-sooco ee Somalida.
Ubax Cabdi oo ay da’deedu tahay 29 jir, waxa ay ka qaxday gurigoodii magaalada Gaalkacyo ee Somaliya dabayaaqadii sannadkii 2008, kaliya ugama ay tegin dagaalada, laakiin sababtu waxa ay tahay hanjabaad iyo garaacis kaga imanaysay dadka ugu dhadhow. Ubax saygeeda Maxamuud Cabdi, waa Soomaali ka soo jeeda qabiilooyinka laga tirada badan yahay ee la hayb sooco.
Qabiillooyinka la hayb-sooco ee sanco yaqaanka ah, waa la takooraa, taas oo inta badan ku timaada shaqooyinka ay qabtaan, sida Kabo-samaynta iyo Bir-tumidda. Soomaalidu dhaqan ahaan qabiillooyinkan ma guursadaan, kumana dhex milmaan bulsho ahaan.
Ubax, ayaa waxay shalay u warantay wakaaladda wararka ee IRIN, waxaanay uga sheekaysay waxa ku dhacay, waxaanay tidhi “Waxaan aqaanay Maxamuud (Saygeeda) ka hor intii aanan guursan. Labadayaduba waxa aanu ku soo wada kornay isku xaafad magaalada Gaalkacayo. Laakiin qabiilka uu yahay darteed, waligay dareenkayga uma aan jeedinin isaga” ayay tidhi, waxaanay intaas ku dartay “Waxa aanu is guursanay wiil yar, waanu geeriyooday muddo yar kadib, dabadeed qoyskaygu waxa ay ii guuriyeen nin kale, laakiin guurkayagaasi waxa uu ku dhamaaday furriin”.
Intaas kadib Ubax Cabdi, waxa ay sheegtay in ay si qarsoodi ah isku guursadeen Maxamuud Cabdi, oo ka soo jeeda beelaha la hayb sooco, waxaanay tidhi “Waxa aanu kulanay mar kale sannadkii 2007, waxaananu bilownay in aanu isu aragno si qarsoodi ah. Waxa aan u qaaday jacayl, waa nin naxariis badan, caqli badan oo qurux badan, waanan ka helay. Kadib, waxa aanu go’aansanay in aanu si qarsoodi ah isku guursano, waxaanu dhacay July 2007. Waa wakhtiga ay dhibaato oo dhami igu bilaabantay. Qoyskayga iyo qaraabadayda ayaa ogaaday, waxaanay si degdeg ah iiga dooneen in aan iska furo. Markii aan ka diidayna walaaladay, abtiyaashay iyo adeeraday ayaa si joogto ah ii garaaci jiray. Maxamuud waa loo hanjabay, mar fursad loo helayna waa la toogtay. Kadib, waxa uu u cararay qaybta Koonfureed ee Gaalkacayo” ayay tidhi.
Ubax Cabdi Adood oo sii wadda sheekada naxdinta leh ee ku dhacday, waxa ay intaas ku dartay “Kadib, qaraabadayda ayaa ogaaday in aan uur u leeyahay Maxamuud, waxaanay isku dayeen in ay xoog igaga soo ridaan.” ayay tidhi.
Ubax Cabdi Cadood intaas kadib, waxa ay ka carartay gurigoodii “Waxa aan seexan jiray guryaha saaxiibaday iyo hudheelada si aan uga badbaado” ayay tidhi. Ubax qofka kaliya ee ay naxariis iyo badbaado ka heli jirtay waxay ahayd hooyadeed “Hooyaday waxa ay ahayd qofka kaliya ee isku dayi jiray in uu i badbaadiyo. Mar ayaa jirtay gacan laga jabiyay iyada oo isku dayaysa in ay iga badbaadiso iyada oo la I garaacayo”.
Ubax, waxa ay u sheegtay qoyskooda in uu ninkeedu Muslim yahay “Waan u sheegay in saygaygu uu Muslim yahay, taasina ay tahay waxa aan xeeriyay, sharcina aanan jebinin, laakiin igama ay dhegaysan” ayay tidhi, waxaanay raacisay “Ugu dambayntii, hooyaday iyo anigu waxa aanu go’aansanay in aan isaga tago ka hor inta aanay i dilin. Hadda waxa aan joogaa Nayroobi, laakiin xattaa halkan kuma dareemayo in aan nabadgelayo, dhawaan ayaa la isoo weeraray haddana albaabka ma dhaafo oo meelna ma tago. Saygaygu waxa uu u cararay Itoobiya, waxaanan rajaynayaa in aanu si dhakhso ah dib ugu midoobi doono meel aanu ku dareemayno amni” ayay tidhi.
Ugu dambayntii, Ubax Cabdi Adood waxa ay sheegtay in haddii ay ku noqoto magaaladeedii la dili doono “Waan ogahay in aanaan waligayo awoodi doonin in aanu ku laabano guryahayagii oo aanu ugu noolaano nabadgelyo. Waxa aan hubaa haddii aanu ku noqono Gaalkacayo in lana dili doono”.
Sheeko layaab leh oo ka dhacday Qol chat room ah o somaaliyeed ((qeybtii labaad )) jacayl AIDS galay maxa lagu dabiiba ?(( qeybtii labaad))